Shiinaha Salon wuxuu door bidaa sedex mowjad isku dhafan iode laser 808 755 1064 DY-DL601 Warshad iyo Warshad | Daanye
Adoo adeegsanaya 808nm 755nm 1064nm mashiinka saarista timaha laser-ka ah ee joogtada ah, dhererka dhererka dhererka waxtarka leh ayaa gaari kara unugyada la bartilmaameedsanayo (timaha papilla), Tallaabooyinka ilaalinta maqaarka ee ku habboon si loo damaanad qaado unugyada la beegsanayo ee dhaawaca ku filan, iyo maqaarka oo aan ku dhowaadba saameyn, si loo hubiyo amniga daaweynta. asal ahaan waxay ka hortageysaa timaha inay mar labaad koraan, sidaas darteed mashiinka saarista timaha laser-ka diode laser ayaa sidoo kale yareyn kara daloolada isla markaana kobcin kara dib-u-cusboonaysiinta maqaarka. Looma baahna in laga walwalo dhibaatada godka qaro weyn iyo maqaarka qalalan ka dib saarista timaha laser safayr
3 hirar oo ku jira 1 madaxa daaweynta ayaa ku shaqeeya qoto dheer oo qoto dheer oo ah timo si loo gaaro waxtar wanaagsan;
755nm dhererka dhererka gaarka ah ee timaha fudud ee maqaarka cad;
808nm dhererka dhererka dhammaan noocyada maqaarka iyo midabka timaha;
1064nm oo dherer dherer ah oo loogu talagalay ka saarista timaha madow;
Nooca laser diode laser 3 hirar
Cabirka mashiinka L55 * W38 * H36
Miisaanka saafiga ah 18kgs
Hore: La qaadan karo 808nm / 810nm diode laser cut timaha DY-DL101
Xiga: ROHS waxay ogolaatay ka saarida timaha quruxda 755 808 1064 laser DY-DL801